सुनको मूल्य रू. ३ सय घट्यो | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर सुनको मूल्य रू. ३ सय घट्यो
सुनको मूल्य रू. ३ सय घट्यो
मङ्सिर ८‚ काठमाडौं । सातामा सुनचाँदीको मूल्य घटेको थियो । आइतवार रू. ५६ हजार ४ सयमा किनबेच भएको सुन स्थानीय बस्तु बजारको अन्तिम दिन शुक्रवार रू.३ सयले घटेर रू. ५६ हजार १ सयमा किनबेच भएको हो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमालगानीकर्ताहरू सुनमा आकषिर्त भएतापनि रोजगारी ह्रास आएको र डलर कमजोर भएका कारण सुनको मूल्य घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जानकारी दिएको छ ।
गत साताको अन्तिम दिनमा सुन प्रतिऔंस १ हजार २ सय ९१ दशमलव ११ डलरमा किनबेच भएको छ । त्यस्तै‚ डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमयदर प्रति अमेरिकी डलर १ सय ३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । गत साता चाँदीको मूल्य १० रुपैयाँ घटेको छ ।
सोमवार सुनको मूल्य स्थिर रहेको थियो । मङ्गलवार मूल्य रू. ४ सयले घट्यो । बुधवार मूल्य पुन: रू. २ सय घटेर रू. ५५ हजार ८ सयमा किनबेच भयो । बिहीवार मूल्यमारू. ४ सय बढेको थियो । शुक्रवार पनि सुनको मूल्यमा रू. १ सय घट्यो । साताको पहिलो दिन रू. ७ सय ७५ मा किनबेच भएको चाँदीको मूल्य अन्तिम दिन घटेर रू. ७ सय ६५ मूल्यमा पुगेको थियो ।
गत हप्ताको सुन चाँदीको मूल्य प्रतितोलामा :-